Camera from NASA's moon missions sold at auction - သတင်း Rule
လေလံတင်ရောင်းချခဲ့ NASA ရဲ့လမစ်ရှင်မှကင်မရာ
အတွက် NASA ရဲ့လမစ်ရှင်မှပွနျလာမှသာကင်မရာကို 1969-1972 များအတွက်ဗီယင်နာစနေနေ့အတွက်လေလံတင်ရောင်းချခဲ့သည် 550,000 ယူရို ($760,000), ဝေးက၎င်း၏ခန့်မှန်းခြေစျေးနှုန်း outdoing.
အဆိုပါ boxy ငွေရောင်စုံကင်မရာက, သောတယ်လီဖုန်းလေလံရောင်းချခဲ့, ကနဦးမှာတန်ဖိုးထားခဲ့ 150,000-200,000 ယူရို.
အဆိုပါ Hasselblad မော်ဒယ်တစ်ယောက် 14 NASA ရဲ့တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်အလထံသို့စေလွှတ်ကင်မရာများ Apollo 11-17 မစ်ရှင်ဒါပေမဲ့နောက်ကျောကိုဆောင်ခဲ့ရမည်ဖို့တစ်ဦးတည်းသာခဲ့.
Buzz Aldrin ကို U.S နှုတ်ဆက်. Apollo စဉ်အတွင်း Mare Tranquillitatis အပေါ်အလံ 11 တွင် 1969. (ဓာတ်ပုံအကြွေး: ဝီကီ​​ပီးဒီးယား)
စည်းကမ်းအဖြစ်, ထိုကင်မရာများ — အများအပြားကကီလိုဂရမ် qui ပစ်စညျး (အလေးချိန်ပေါင်) နှင့်တစ်ဦးအာကာသဝတ်စုံ၏ရှေ့မှပူးတွဲပါနိုင် — ထိုအာကာသယာဉ်မှူးလကျောက်ကိုပြန်ရောက်စေဖို့ခွင့်ပြုစွန့်ပစ်ခဲ့ကြ, အလေးချိန်အမစ်ရှင်အပေါ်တစ်ဦးချုပ်စ​​ိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ခြင်း.
“ဒါဟာအပေါ်လမြေမှုန့်ရှိပါတယ်… ငါမဆိုအခြားကင်မရာကိုကရှိပါတယ်စဉ်းစားကြဘူး,” ပတေရုသ Coeln, လေလံပွဲစီစဉ်သော Westlicht ပြခန်းပိုင်ရှင်, ရှားပါးအပိုင်းအစကပြောသည်.
ကင်မရာက, သောပုဂ္ဂလိကစုဆောင်းခြင်းဖြင့်ရောင်းချလျက်ရှိခဲ့သည်, ယူအာကာသယာဉ်မှူးဂျင်မ် Irwin ကအသုံးပြုခဲ့ 299 အပိုလိုကာလအတွင်းဓါတ်ပုံတွေ 15 ဇူလိုင်လသြဂုတ်လထဲမှာမစ်ရှင် 1971.
တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ပန်းကန်အတွင်း၌အရေအတွက်နှင့်အတူထွင်းဖြစ်ပါတယ် 38, Irwin ရဲ့နာဆာတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်လာတဲ့ပေါ်သောတူညီသောအရေအတွက်.
နီးစပ် 600 အရာဝတ္ထုစနေနေ့ကရောင်းချခြင်းအပေါ်ခဲ့ကြသည်. အဆိုပါ Westlicht ပြခန်းကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ် လေလံအိမ်သူအိမ်သား ကင်မရာအဘို့နှင့်သမိုင်းမှာစျေးအကြီးဆုံးဓာတ်ပုံပြပွဲပစ္စည်းကိရိယာများတချို့၏ရောင်းချခြင်းကြီးကြပ်ခဲ့သည်, တစ်ဦးအပါအဝင် 1923 ရောင်းချကြောင်း Leica ကင်မရာကရှေ့ပြေးပုံစံ 2.16 ယူရိုသန်း, ကမ္ဘာ့စံချိန်.
ဤဆောင်ပါး, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် AFP သို့ နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2014 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
23073	0 Apollo, Apollo 15, လလေံပှဲ, ကင်မရာက, Hasselblad, ဂျိမ်း Irwin, နာဆာ, ဗီယင်နာ
← စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုသူခိုးမဖြစ် 22 သင့်ရဲ့ခုခံအားစနစ် Boost ရန်သိကောင်းစရာများ →